Zanu-PF supporters celebrate after ConCourt upholds Mnangagwa's victory
A supporter Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (Zanu–PF) candidate and winner Emmerson Mnangagwa celebrates in the street after the court delivered its conclusions, in Bulawayo, Zimbabwe. (File, AFP)
Supporters of the Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (Zanu–PF) sit in a room to watch on television Zimbabwean Chief Justice Luke Malaba during a court ruling of the election results challenge in Bulawayo, Zimbabwe. (File, AFP)
A supporter of the Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (Zanu–PF) reacts as he watches on television Zimbabwean Chief Justice Luke Malaba during a court ruling of the election results challenge in Bulawayo, Zimbabwe. (File, AFP)
Supporters of the Zimbabwe African National Union - Patriotic Front (Zanu–PF) sit in a room to watch on television Zimbabwean Chief Justice Luke Malaba during a court ruling of the election results challenge in Bulawayo, Zimbabwe. (File, AFP)
Supporters of Zimbabwe's ruling Zanu-PF party react after Zimbabwe's top court threw out an opposition bid to overturn presidential election results in favour of the Zanu-PF candidate in Harare, Zimbabwe. (File, AFP)
A supporter of Zimbabwe's ruling Zanu-PF party wave the national flag after Zimbabwe's top court threw out an opposition bid to overturn presidential election results in favour of the Zanu-PF candidate in Harare, Zimbabwe. (File, AFP)
Supporters Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (Zanu–PF) candidate and winner Emmerson Mnangagwa celebrate in the street after the court delivered its conclusions, in Bulawayo, Zimbabwe. (File, AFP)
A supporter of Zimbabwe's ruling Zanu-PF party celebrates in the street after Zimbabwe's top court threw out an opposition bid to overturn presidential election results in favour of the Zanu-PF candidate in Harare. (File, AFP)
Supporters of Zimbabwe's ruling Zanu-PF party react after Zimbabwe's top court threw out an opposition bid to overturn presidential election results in favour of the Zanu-PF candidate in Harare. (File, AFP)